के हो स्वरोदय विज्ञान ? जसमा लुकेको छ स्वस्थ जीवनको रहस्य - Kendrabindu Nepal Online News
के हो स्वरोदय विज्ञान ? जसमा लुकेको छ स्वस्थ जीवनको रहस्य
आफ्नै शरीरलाई नियालौँ । शरीर रचनामाथि गौर गरेर हेरौँ । यो आफैमा अद्भूत छ । कसरी नि अद्भुत ? सोचौँ त, हाम्रा भित्री अंगहरू कसरी चल्छन् ? हामीले खाएको अन्नपानी कसरी शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ ? त्यसले कसरी आँखालाई दृष्टि दिन्छ, मस्तिष्कलाई चेतना दिन्छ ? कसरी शरीरमा ऊर्जा प्रवाह गर्छ ।
जति सोच्यो, उति अनमोल लाग्छ हाम्रो शरीर । यही शरीरभित्र अनेक किसिमको शक्ति छ । त्यो शक्ति तपाईंसँग छ, हामीसँग छ । हरेकसँग छ । तर, दुर्भाग्यचाहिँ के भने, हामीले जीवन भोग गरिरहँदा पनि आफैभित्रको शक्तिबारे कुनै भेउ पाउँदैनाैँ । जीवन सित्तैंमा पाएको भनिठान्छौँ र वास्ता गर्दैनौँ अनि विभिन्न रोगको सिकार हुन्छौँ । जीवनका यस्तै अद्भुत पाटोलाई अध्ययन गर्ने विज्ञान हो– स्वरोदय विज्ञान ।
के हो स्वरोदय ?
स्वरोदय विज्ञान साससँग सम्बन्धित विज्ञान हो ।
तपाईंले कहिल्यै आफ्नो नाकलाई ध्यानले हेर्नुभएको छ ? छ भने सुन्नुस, हाम्रो जीवनमा नाकको उपयोगिता के छ ? यो प्रश्न दिएपछि मात्र अगाडि पढ्नु ठीक हुन्छ । तपाईंको उत्तर पनि पक्कै हुन्छ कि नाक हाम्रो प्रमुख ज्ञानेन्ऽिय हो, यसको माध्यमबाटै हामी गन्ध ठम्याउन एवं आवश्यक प्राणवायु ग्रहण गर्न सक्छौँ । तर धेरै जनालाई एउटा महत्वपूर्ण एवं लाभदायक विज्ञानका विषयमा जानकारी नहुन सक्छ ।
केही गरी तपाईंलाई स्वर विज्ञान वा स्वरोदय विज्ञानका विषयमा जानकारी छ भने सम्झनुस्, तपाईं भाग्यमानी एवं ईश्वरको कृपापात्र हुनुहुन्छ किनभने स्वर विज्ञानका बारेमा जानकारी राख्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि विपरीत परिस्थितिमा फस्दैन र फसिहाले पनि सजिलै विपरीत परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाएर बाहिर निस्कन्छ ।
स्वर विज्ञान एक साह्रै सजिलो विद्या हो । यो विद्यालाई प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपालले ‘विज्ञान’ को नाम दिएर सुशोभित गरेका हुन् । उनका अनुसार स्वरोदय, नाकको प्वालबाट ग्रहण गरिने श्वास हो, जो वायु रूपमा हुन्छ । श्वास नै जीवको प्राण हो र यसै श्वासलाई स्वर भनिन्छ ।
स्वर चल्ने क्रियालाई उदय हुनु मानेर स्वरोदय भनिएको हो । र विज्ञान, जसमा कुनै विधिबाट विषयको रहस्य बुझ्ने प्रयास गरिन्छ त्यो विज्ञान हो । स्वरोदय विज्ञान एक सजिलो प्रणाली हो, जसलाई प्रत्येक श्वास लिने जीवले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।
स्वरोदय एक विज्ञान
स्वरोदय आफैमा पूर्ण विज्ञान हो । यसको ज्ञान हुने व्यक्ति अनेक प्रकारले लाभान्वित हुनथाल्छ । यसको लाभ प्राप्त गर्नका लागि कुनै कठिन गणित, साधना, मन्त्र जप, उपवास वा तपस्या आवश्यक पर्दैन। । केवल श्वासको गति एवं दिशाको स्थिति ज्ञात गर्ने अभ्यास मात्र गरे पुग्छ ।
यो विद्या यति सरल छ कि थोरै मात्र प्रयास, लगन एवं आस्था राखेर यसको अध्ययन वा अभ्यास गरियो भने जीवनपर्यन्त यसको लाभ उठाउन सकिन्छ ।
सूर्य, चन्द्र र सुषुम्ना स्वर
सर्वप्रथम हातले नाकको प्वालबाट बाहिर निस्कने श्वासलाई महसुस गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । दायाँ वा बायाँ कुन प्वालबाट श्वास बाहिर निस्किरहेको छ, विचार गर्नुपर्छ । स्वरोदय विज्ञानका अनुसार श्वास दाहिने प्वालबाट बाहिर निस्किएको छ भने त्यो सूर्य स्वर हुन्छ । श्वास देब्रे प्वालबाट बाहिर निस्किएको छ भने चन्द्र स्वर हुन्छ । दुवै प्वालबाट बाहिर निस्किरहेको छ भने त्यसलाई सुषुम्ना स्वर भनिन्छ । श्वास बाहिर निस्कने यी तीन क्रिया नै स्वरोदय विज्ञानको आधार हो ।
सूर्य स्वर पुरुष प्रधान हुन्छ । यसको रंग कालो हुन्छ । यो शिव स्वरूप हुन्छ । यसको विपरीत चन्द्र स्वर स्त्री प्रधान, रंग गोरो एवं शक्ति अर्थात् पार्वतीको स्वरूप हुन्छ ।
खासमा इडा नाडी शरीरको बायाँतर्फ रहेको हुन्छ भने पिंगला नाडी दाहिनेतर्फ हुन्छ अर्थात् इडा नाडीमा चन्द्र स्वर स्थित हुन्छ भने पिंगला नाडीमा सूर्य स्वर । सुषुम्ना नाडी बीचमा रहेको हुन्छ तसर्थ दुवै तर्फबाट निस्कने श्वासलाई सुषुम्ना स्वर भनिन्छ ।
स्वर चिन्ने सरल विधि
शान्त भावले मन एकाग्र गरेर बस्ने । आफ्नो दायाँ हातलाई नाकको प्वालनजिक लैजाने । चोरी औंला नाकको प्वालमुनि राखेर श्वास बाहिर फाल्ने । यसो गर्दा कुनै एक प्वालबाट श्वास बढी आएको थाहा हुन्छ । जतापट्टिबाट बढी श्वास निस्किएको छ त्यही स्वर चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
एउटा प्वालबाट बढी तथा अर्कोबाट कम श्वास निस्किएको महसुस भयो भने त्यो सुषुम्ना स्वर हो भन्न सकिन्छ ।
एक अर्को विधिअनुसार ऐना वा सिसालाई नाकको प्वालमुनि राख्ने । जुन प्वालमुनिको सिसामा वाफको कण देखिन्छ, त्यही स्वर चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सनातन वैदिक धर्ममा पनि यो कुराको उल्लेख पाइन्छ कि कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुअघि आफ्नो स्वर कुन चलिरहेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ अनि मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ ।
स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि स्वर विज्ञानको विशेष महत्व छ । कुशल वैद्यहरूले यसै विधिबाट मानिसको शारीरिक एवं मानसिक अवस्था आकलन गर्छन् ।
यसबाट लिन सकिने लाभ
सुखी, समृद्ध र निरोग रहने अचूक तरिका हो शिव स्वरोदय ।
यो सबैका लागि लाभदायक भए पनि विशेष रूपले शिवसँग लगाव भएका साधकहरूका लागि बढी उपयोगी छ ।
आफ्नो स्वरलाई चिन्नसक्ने व्यक्ति अधिक समय अस्वस्थ रहन सक्दैन । संघर्षपूर्ण जीवनमा उसले सायदै पराजयको मुख देख्नुपर्छ । धन, सम्मान, पद आदिका लागि विचार गरिरहन आवश्यक हुँदैन । यस्ता व्यक्ति अरूको सहायता गर्न सक्षम हुनुका साथै आफ्नो इच्छा भएका कुरा सहजै प्राप्त गर्नसक्ने हुन्छन् ।
शिव स्वरोदय साधकहरूको भाषा हो । हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोगमा ल्याएका यो विधा अहिले लुप्तप्रायः भएको छ । तथापि यससम्बन्धी पुस्तक तथा अन्य सामग्री उपलब्ध छन् । योग्य गुरुको निर्देशनमा यसको अभ्यास गरेर यससम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल सकिन्छ ।
शिव स्वरोदय विज्ञान आधारित अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ हो । यसमा कुल ३ सय ९५ श्लोक छन् । यो ग्रन्थ शिवपार्वती संवादका रूपमा लेखिएको छ । शायद यसकारण कि सम्पूर्ण सृष्टिमा समष्टि र व्यष्टिको अनवरत संवाद चलिरहन्छ अनि योगी अन्तर्मुखी भएर योगद्वारा यो संवाद सुन्छ, बुझ्छ र आत्मसात् गर्छ । यो ग्रन्थको रचयिता साक्षात् देवाधिदेव भगवान शिवलाई मानिन्छ ।
शिव स्वरोदय साधना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
–बिहान उठेपछि ओछ्यानमै बसेर आँखा बन्द गरी कुन नाकबाट सास चलिरहेको छ त्यो पत्ता लगाउने । बायाँ नाकबाट सास चलिरहेको भए दक्षिण वा पश्चिमतर्फ मुख फर्काएर तथा दायाँ नाकबाट सास चलिरहेको भए उत्तर वा पूर्वतिर मुख फर्काएर बस्ने । अनि जुन नाकबाट सास चलिरहेको छ, त्यतातिरकै हातको हत्केलाले अनुहारमा त्यतैपट्टकिो भाग स्पर्श गर्ने ।
–उक्त कार्य गर्ने समयमा दाहिने स्वर चलेको भए सूर्यको ध्यान गरी सूर्यको किरण आएर आफ्नो हृदयमा प्रवेश गरेर शरीरलाई शक्ति प्रदान गरिरहेको छ भनेर अनुभव गर्ने । बायाँ स्वर चलेको भए पूर्णिमको चन्द्रमालाई ध्यान गर्ने र चन्द्रमाको किरण हृदयमा प्रवेश गरेर अमृत बर्साइरहेको अनुभव गर्ने ।
–यसपछि दुवै हत्केलालाई आवाहन मुमुडमा मिलाएर आँखामा लगाई आँखा खोल्ने र जुन नाकबाट स्वर चलिरहेको छ, त्यसै हातको हत्केलाको चोरी औंलाको फेदमा ध्यान केन्द्रित गर्ने । यसपछि हातमा निवास गर्ने देवीदेवताको दर्शन गर्न प्रयास गर्दै निम्नलिखित श्लोक पढ्ने ।
करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् ।।
तत्पश्चात् निम्नलिखित श्लोकको उच्चारण गरी पृथ्वी मातालाई स्मरण गर्दै तन्त्र र योग शास्त्रमा वर्णित पृथ्वीको स्वरूप ध्यान गर्ने ।
विष्णुपत्निनमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ।।
अनि जुन स्वर चलिरहेको छ, त्यतैतर्फको हातले माता पृथ्वीलाई स्पर्श गर्ने र त्यतैपट्टिको पाइला जमीनमा राखेर ओछ्यानबाट ओर्लने ।
आफ्नो दिनचर्याको निम्नलिखित कार्य स्वरअनुसार गर्ने
शौच सदैव दायाँ स्वर चलेका बेलामा तथा मूत्रत्याग बायाँ स्वर चलेका बेलामा गर्ने ।
भोजन दायाँ स्वर चलेका बेलामा तथा भोजनपछि तुरुन्तै १०(१५ मिनट बायाँ कोल्टो फर्केर पल्टने।
पानी बायाँ स्वर चलेका बेला पिउने ।
दाहिने स्वर चलेका बेलामा सुत्ने र देब्रे स्वर चलेका बेलामा उठ्ने ।
स्वरअनुसार काम गर्दा शुभ परिणाम प्राप्त हुन्छ
घरबाहिर निस्कँदा जुन स्वर चलिरहेको छ, त्यतैको पाइलो पहिले चाल्ने ।
अरूको घरमा प्रवेश गर्दा दायाँ स्वर चलेको भए उत्तम हुन्छ ।
जनसभा सम्बोधित गर्न वा अध्ययन प्रारम्भ गर्नका लागि बायाँ स्वर चलेको समय राम्रो हुन्छ ।
ध्यान, मांगलिक कार्य आदि प्रारम्भ, गृहप्रवेश आदिका लागि बायाँ स्वर चलेको समय उत्तम हुन्छ ।
लामो यात्रा बायाँ स्वरको प्रवाहकालमा तथा छोटो यात्रा दायाँ स्वरको प्रवाहकालमा प्रारम्भ गर्नु शुभ हुन्छ ।
दिनमा बायाँ स्वर तथा रातमा दायाँ स्वर चल्नु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले सर्वोत्तम मानिएको छ ।
यसरी विस्तारविस्तार एकएक गर्दै स्वर विज्ञानको कुरा अपनाउँदै जीवनमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी विशेष जानकारी लिन मन लागेमा शिव स्वरोदय नामक पुस्तक पढ्न तथा यस विषयको जानकार व्यक्तिसँग सोध्नु उचित हुन्छ ।